Hubinta Tayada - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax waxay soo saartay habab taxane ah iyo habab si loo hubiyo in keenista alaabtu ay buuxineyso shuruudaha macaamiisha iyadoo loo marayo dhammaan wax soo saarka laga soo xulay alaab-qeybiyeyaasha, kormeerka WIP, iyo kormeerka bixitaanka ee adeegga macaamiisha. Waa kuwan tusaalooyinka qaarkood:
Qiimeynta Iyo Hantidhawrka Badeecadeena
Alaab-qeybiyeyaasha waa in la qiimeeyaa kahor oggolaanshaha kooxda qiimeynta alaab-qeybiyeyaasha ee fumax. Intaa waxaa dheer, Fumax Tech ayaa qiimeyn doonta oo qiimeyn doonta alaab-qeybiye kasta hal jeer sanadkii si loo damaanad qaado in alaab-qeybiyeyaashu ay u keenaan agab tayo leh oo buuxinaya shuruudaha fumax. Intaas waxaa sii dheer, Fumax Tech waxay si isdaba joog ah u horumarisaa alaab-qeybiyeyaasha waxayna dhiirrigelisaa inay horumariso tayadooda iyo maareynta bey'adda ee salka ku haysa nidaamyada ISO9001.
Dib u eegista Qandaraaska
Kahor aqbalida amar, Fumax waa inay dib u eegis ku sameysaa oo ay hubisaa shuruudaha macaamiisha si loo hubiyo in Fumax ay leedahay awood ay ku qanciso shuruudaha macaamiisha oo ay ku jiraan qeexida, gaarsiinta iyo dalabaadka kale.
Diyaarinta, Dib-u-eegista Iyo Xakamaynta Barashada Waxsoosaarka
Fumax waxay qiimeyn doontaa dhammaan shuruudaha kadib markay hesho xogta nashqadeynta macaamiisha iyo dukumintiga la xiriira. Kadib, u beddelo qashinka naqshadeynta qashin-soo-saarka CAM. Ugu dambeyntiina, MI oo ku daraya qashin-soo-saarka wax-soo-saarka ayaa loo qaabeyn doonaa iyada oo loo eegayo habka wax-soo-saarka dhabta ah iyo farsamada ee fumax. MI waa in dib loo eego kadib diyaarinta injineerada madaxbanaan. Kahor intaan MI la soo saarin, waa inay dib u eegaan injineerada QA oo la ansixiyaa. Qodista iyo duubista xogta waa in lagu xaqiijiyaa baaritaanka qodobka koowaad kahor intaan lasoo saarin. Erey ahaan, Fumax TechTechmake wuxuu sameeyaa siyaabo lagu damaanad qaado in dukumintiyada wax soosaarku sax tahay oo ansax tahay.
Kontaroolka soo gala IQC
Fumax, dhammaan qalabka waa in la caddeeyaa oo la oggolaadaa ka hor inta aan la aadin bakhaarka. Fumax TechWaxay soo saartaa habab adag oo xaqiijin ah iyo tilmaamo shaqo oo lagu xakameynayo soo-galista. Intaas waxaa sii dheer, Fumax TechTechos waxay soo bandhigeysaa qalab iyo qalab baaritaan oo kala duwan si loo dammaanad qaado awoodda si sax ah loogu xukumi karo in waxyaabaha la xaqiijiyay ay wanaagsan yihiin iyo in kale. Fumax TechTechapplies nidaam kombuyuutar ah oo lagu maareeyo qalabka, kaas oo dammaanad qaadaya in qalabka loo isticmaalo marka ugu horreysa-marka-hore. Markuu hal shay u dhowaado taariikhda uu dhacayo, nidaamku wuxuu soo saari doonaa digniin, taas oo hubinaysa in agabyada la isticmaalay kahor dhicitaanka ama la hubinayo kahor isticmaalka.
Xakamaynta Nidaamka Been Abuurka
Tilmaamaha wax soo saarka saxda ah (MI), wadarta maaraynta qalabka iyo dayactirka, kormeerka iyo kormeerka WIP ee adag iyo sidoo kale tilmaamaha shaqada, kuwan oo dhan waxay ka dhigayaan geedi socodka wax soo saarka oo dhan gebi ahaanba in la xakameeyo. Qalab kala duwan oo sax ah oo ay ku jiraan nidaamka kormeerka AOI iyo sidoo kale tilmaamaha kormeerka WIP ee qumman iyo qorshaha xakamaynta, dhammaan dammaanad qaadkan in alaabada semi-ka iyo alaabada ugu dambeysa, dhammaantood ay gaaraan shuruudaha macaamiisha '.
Xakamaynta iyo kormeerka kama dambaysta ah
Fumax, dhammaan PCB-yada waa inay maraan imtixaanka furan iyo midka gaaban iyo sidoo kale kormeerka muuqaalka kadib marka laga gudbo tijaabooyinka jireed ee qaraabada ah.
Fumax TechTechowns qalab kala duwan oo tijaabo ah oo horumarsan oo ay ka mid yihiin Tijaabada AOI, baaritaanka raajada iyo baaritaanka wareegga wareegga PCB.
Hantidhawrka Xilka Laga Qaaday Iyo Ansixinta
Fumax TechTechsets waxay diyaarineysaa hawl gaar ah, FQA si loo baaro badeecada iyadoo la raacayo macaamiisha macaamiisheeda iyo waxyaabaha looga baahan yahay iyadoo la tijaabinayo. Alaabooyinka waa in la oggolaadaa ka hor inta aan la xirxirin. Ka hor intaan la keenin, FQA waa inay 100% hubisaa shixnad kasta oo loogu talagalay nambarka qaybta been-abuurka ah, nambarka qeybta macaamiisha, tirada, cinwaanka loo socdo iyo liiska xirmooyinka iwm.
Fumax TechTechsets waxay diyaarinaysaa koox xirfadlayaal ah oo macaamiisha ah si ay si firfircoon ula xiriiraan macaamiisha isla markaana ay ula macaamilaan macaamiisha jawaab celinteeda waqtigeeda. Haddii loo baahdo, waxay lashaqeyn doonaan macaamiisha si loo xalliyo dhibaatooyinka soo noqnoqda ee goobta macaamiisha. Fumax TechTechis waxay si aad ah uga walaacsan tahay baahida macaamiisha waxayna si xilliyeed ah u baareysaa macaamiisha si ay wax uga ogaato waxyaabaha ay u baahan yihiin. Markaas Fumax TechTechwill wuxuu waqtigiisa ku hagaajin doonaa adeegga macaamiisha oo wuxuu ka dhigayaa inay badeecaddu kaafiso baahida macaamiisha
◆ Geedi socodka wax soo saarka RoHS oo dhameystiran
◆ Xakamaynta tayada nidaamka oo dhammaystiran
◆ 100% hubinta raadinta
◆ 100% tijaabada korantada (awoodaha iyo tijaabada gaagaaban)
◆ 100% imtixaan shaqeynaya
◆ 100% tijaabinta barnaamijka
◆ Kulan, calaamadeyn iyo xirxirida looxyada ama nidaamka iyadoo la raacayo baakadaha macaamiisha shuruudaha
◆ Waxaan u sameyn karnaa baaritaanka shaqeynta looxyada ama nidaamka sida ku cad tilmaamaha imtixaanka macaamilka, iyo waxaan bixin karnaa warbixin kooban oo tijaabo ah si aan uga caawinno macaamiisha inay helaan isha cilladda.
◆ Dammaanad qaadka nolosha
◆ Deegaanka shaqada ee ESD-aamin ah
◆ Baakadaha ESD iyo badbaadada
◆ ISO9001: Shahaadada 2008